विकासका पूर्वाधार पु¥याएर डोल्पालाई सुगम बनाइनेछ : प्रम ओली
काठमाडौं, ४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका पूर्वाधार पु¥याएर डोल्पालाई सरकारले सुगम बनाउने बताएका छन् ।
राजपा अझै अलमलमा, ‘पर्ख र हेरको नीति’ कहिलेसम्म ?
काठमाडौँ, ३ फागुन । ‘सत्ताका लागि जस्तोसुकै निर्णय र सम्झौता गर्न पछि नपर्नेे’ जस्ता आरोप खेपिरहेका मधेशी दल अहिले सत्ता वा संघर्षको अलमलमा रहेको देखिन्छ ।
मधेशी दललाई महाधिवेशनको चटारो
काठमाडौं, ३ फागुन । दुबै मधेशी दल संघीय समाजवादी नेपाल र राजपा नेपाल महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् । दुवै दल अहिले पार्टीको संगठन भएका जिल्लामा साधारण र सक्रिय सदस्यता वितरणमा लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री राउतको ‘ललिपप’
काठमाडौं, १ फागुन । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ललिपप पठाएका छन् ।
मधेशी जनताको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ : प्रचण्ड
राम नारायण पण्डित, सिरहा, २८ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिरहालाई आँप जोनको रुपमा बिकास गर्ने बताएका छन् ।
राजपाको सदस्यता पाँच लाख पुग्यो
काठमाडौं, २७ माघ । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले आगामी महाधिवेशन लक्षित गरी २७ जिल्लामा करिब पाँच लाख सक्रिय सदस्यता वितरण गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न हृदयेश त्रिपाठीको माग
काठमाडौं, २७ माघ । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
राजपाको दोहोरो नीति :केन्द्रमा सत्तासँग साँठगाँठ, प्रदेशमा आन्दोलनको तयारी
काठमाडौं । राजपा नेपाल अहिले दुविधाग्रस्त अवस्थामा रहेको पार्टीका नेताहरूको पछिल्लो भनाइबाट पुष्टि भइरहेको छ ।
संघीयताको जननी भएकाले ससफोले मात्रै यसलाई सही दिशा दिन सक्छ : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौँ, २७ माघ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आफूले जन्माएको सन्तानको माया आमालाई बढी भएजस्तै संघीयताको माया पनि जन्माउनेलाई नै बढी हुन्छ भन्दै ससफो नेपालले नै त्यसको प्रसव बेदना सहेको बताए ।
वार्ता गर्न गठबन्धन तयार : प्रवक्ता खान
काठमाडौं, २५ माघ । राज्यबाट उचित र उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिए स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले वार्ता र सम्वाद गर्न तयार रहेको गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानले जनाएका छन् ।
फोरमले बुझायो सभामुखलाई ज्ञापनपत्र
काठमाडौं, २४ माघ । सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पार्टीका प्रतिनिधिसभाका सांसद हरिनारायणप्रसाद रौनियारको निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न माग गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
अमेरिकी राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीको वार्ता
काठमाडौं,२४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीबीच भेटवार्ता भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतद्वारा महायज्ञ स्थलको निरीक्षण
जनकपुरधाम, २४ माघ । मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले धनुषाको लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका वडा नं. १ मा माघ २९ गतेदेखि शुरु हुन लागेको महायज्ञ स्थलको निरीक्षण गरेका छन् ।
प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय : मुख्यमन्त्री राउत
जनकपुरधाम, २४ माघ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अगामी आर्थिक वर्ष भित्र प्रत्येक पालिकामा एक एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने बताएका छन् ।